Wikimedia Foundation elections/2021/2021-06-09/Call for Candidates/ig - Meta
Wikimedia Foundation elections/2021/2021-06-09/Call for Candidates/ig
The Ndi kọmịtịị nke nlekọta maka ntụli aka 2021 nke na abia abia.Ndi anamachọ si n'obodo ka achọrọ iji mmejụpụta oche ndi dinụ
Ndị kọmịtịị nke nlekọta Wikimedia Foundation na-elekọta ọrụ Wikimedia Foundation. Ndị na-elekọta obodo na ndị nlekọta a họpụtara ahọpụta mejupụtara Kọmitii Ndị Nlekọta. Onye nlekọta ọ bụla na-eje ozi afọ atọ. Obodo Wikimedia nwere ohere ịtụ vootu maka ndị nlekọta obodo.
Ndị ntinye aka Wikimedia ga-eme votu iji mejupụta oche anọ na kọmịtịị n'afọ 2021. Nke a bụ ohere iji meziwanye nnochite anya, iche iche, na nka nke kọmịtịị dị ka otu.
Ole ndị bụ ndi anamachọ? ịbụ onye anamachọ?
Wikimedia bụ ije zuru ụwa ọnụ ma na-achọ ndị anamachọ si n'obodo sara mbara. Ndị anamachọ kwesịrị iche echiche banyere ahụmịhe na echiche ha ga-eweta na Kọmịtịị. Ndị anamachọ na-eme nke ọma n'eso usoro na ọrụ Wikimedia ma bụrụ ndị na-eche echiche, na-asọpụrụ, ma ndị obodo. Ndị kọmịtịị ga-achọ ịchọta echiche na olu ndị n'egosighi ha ma dị mkpa maka ngagharị anyị. Ha kwesiri iweta ihe Wikimedia choro n'aka Onye nlekọta ọhụrụ ọzọ.
Ndị nlekọta na-eje ozi afọ atọ ma nwee ike ije ozi ruo oge atọ. Oge ntinye oge bụ ihe dị ka awa 150 kwa afọ, ewezuga njem. Oge a anaghị etisasị kwa afọ. Oge a bụ Maka nzukọ. Ihe a na-atụ anya ya bụ na ndị nlekọta na-eje ozi ma ọ dịkarịa ala otu kọmitii.
Ihe Ndị Achọrọ
Bekee bụ asụsụ azụmahịa maka kọmịtịị. Ndi anamachọ kwesiri inwe nghota nke Bekee, mana nkwado na ọzụzụ bu ihe ndi ozo. A ga-asụgharị akwụkwọ ndị anamachọ n'asụsụ dị iche iche iji ruo ndị na atuli aka sara mbara.
A na anabata ndi anamachọ nile si na ọrụ ngo na obodo nile ndi nyere ihe ndi nlekọta wikimedia chọrọ.Ọ bụrụ n ’ị maara onye nwere ike ịbụ ezigbo onye nlekọta , gbaa ha ume ịzọ ntuli aka.Ndi anamachọ were ike iwete ozi ma Nyefee nhoputa ha na Tinye iji bụrụ peeji ndi anamachọ.
Daalụ maka nkwado gị
Ndi nlekọta kọmịtịị nke Wikimedia Foundation.
Retrieved from "https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Wikimedia_Foundation_elections/2021/2021-06-09/Call_for_Candidates/ig&oldid=21604208"